Taratasim-baovao RV: Ezaka fifarimbonana hanangonana loharano antserasera momba ny famaliana ny coronavirus · Global Voices teny Malagasy
Taratasim-baovao RV: Ezaka fifarimbonana hanangonana loharano antserasera momba ny famaliana ny coronavirus
Voadika ny 23 Avrily 2020 4:03 GMT
Pikantsarin'ny lohatenin'ny boky, ampiasaina araka ny lisansa Attribution-ShareAlike 4.0 International.
Naotin'ny Rising Voices: Ny taratasim-baovao mivoaka indroa isa-kerinandro dia manome ny fehin'ireo lahatsoratra bilaogy vao haingana miresaka fampiatiana dizitaly ka ao anatin'izany ny fahafaha-mahazo sy mikirakira ireo fitaovana dizitaly (nomerika), sy ireo hirika sy fomba maro samihafa ho an'ny vondrom-piarahamonina mandray anjara feno an-tserasera. Vakio ato raha hijery ny famoahana teo aloha amin'ity taratasim-baovao ity.
Manao ahoana ianareo izay tao ho ao, ry mpamaky hajaina? Manantena fa salama tsara ianareo amin'izao fivoahan'ny taratasim-baovao izao.
Tao anatin'ny hanangonana ireo loharanom-baovao an-tserasera mifandraika amin'ny COVID-19 azon'ny sarambabem-bahoaka ampiasaina, indro ny Newspeak House namoaka ny santatr'andraikitra Coronavirus Tech Handbook — tranomboky ifarimbonan'ny manampahaizana manokana amin'ny sehatra samihafa manome ny fahendreny hanampiana antsika ao anatin'izao fotoana mampisy rarintsaina izao.
Ao anatin'io boky omby tanana io no ahitanareo torohay ho an'ny dokotera sy ny mpanabe, manomboka amin'ny hevitra maro itokana-monina ka hatramin'ny torohevitra ho an'ny ray aman-dreny (fitaizana). Ary raha mahatsapa ianao ny handray anjara amin'izao ezaka iarahana izao, azonao atao ihany koa ny miserana manampy amin'ny fandaminana azy, fandikana azy teny, na manao fanampiana amin'ity fotokevitra ity.
Misy ihany koa ny vondrona Facebook hiresahana bebe kokoa amin'izay fitaovana mbola azo ampidirina, ary toy izany ihany koa ny fantsona WhatsApp “hiresahana lalindalina kokoa” isaky ny lohahevitra.
MARO HAFA KOKOA AVY AMIN'NY BILAOGIN'NY RISING VOICES
Nankafy ilay fifandimbiasam-panentanana Twitter ve ianao nandritra ny taona 2019, ho ao anatin'ny fiaraha-mahatsiaro nataon'ny RV amin'ny taona iraisampirenena ho an'ny teny zanatany (indizeny-vazimba teratany-tompotany) (#IYIL19)? Ny vaovao mahafaly dia ny nanitaranay ny ezaka fanentanana ho amin'ity taona 2020 mba hanohizana hampiseho ireo asa mahatalanjona avy amin'ireo mpikatroky ny fiteny manerantany. Koa raha manitikitika anao ny momba ireo fiteny indizeny manerana izao tontolo izao sy ny hoe inona (iza) no tafiditra amin'ny fampiroboroboana sy/na ny famelomana aina indray azy ireny, dia miangavy aza miala, araho hatrany ny eto! Azonao vakiana ihany koa ireo lahatsoratra miresaka olona hamantaranao bebe kokoa momba ireo mpampiatrano sy ireo asa nataony sy ny vinan-dry zareo momba ny fiteniny avy.
Aída Naxhielly [es] miresaka ireo fanamby raha mijoro ho indizeny ao an-tanandehibe sy ny hoe ahoana ny namolavolan'ireny fanamby ireny ny hevitry ny “vondrom-piarahamonina” (fokonolona) sy ny fampitana ny fiteny — tenim-paritry ny Mixtec miainga avy ao avaratra andrefan'i Oaxaca ao Meksika
Fikambanana ve ianareo manokatena hampandroso ny zo nomerika ao Amerika Latina? Ny Famatsiambola Indela (Santatra Andraikitra ho an'ny Zo Nomerika ao Amerika Latina) dia te-hanoahana anareo fikambanana miorina ao Amerika Latina ao anatin'izao ezaka be izao. Miangavy jereo ato raha hijery ny antsipirihany. Fisoratana fangatahana hatramin'ny 30 Avrily 2020
Hamaliana ny areti-mandringana ankehitriny, dia nanitatra ny haben'ny programa (MOSS) na Mozilla Open Source Support [Tohana Mozilla Tovozina Malalaka] ny Mozilla handrisihana ny tetikasa tovozina malalaka [Open Source] mety ho ao anatin'ny vahaolana. Miasa ao anatin'ny tetikasa heverina ho efa matotra? Miangavy hevero ny hisoratana anarana ho an'ny Famatsiambola Vahaolan'ny COVID-19 ity mba hampiroborobo ny tetikasanareo. Miangavy jereo ato ijerena ny antsipirihany fanampiny.
Tsy ampy ve ny votoaty COVID-19 amin'ny fiteninareo? Angamba afaka mandray anjara amin'ny fandikana teny ireo fandrisihan'ny Fikambanana Manerantany misahana ny Fahasalamana (OMS) momba ny COVID-19 (endrika 18 Marsa) ho an'ny vondrom-piarahamoninao amin'ny fiteninareo manokana ianao. Miangavy hevero ny hanatevin-daharana ny Orina Mpanasoa O amin'izao fitarihana ezaka volantera izao ary ataovy ny anjaranao.
Ny Loka Kurt Schork 2020 ao amin'ny Fanoratan-Gazety Iraisampirenena dia miantso fisoratana anarana amin'ny sokajy telo ho an'ireo mpanangom-baovao ao an-toerana ho an'ny firenena andalam-pandrosoana na tetezamita, mpanora-gazety mahaleotena ao amin'ny faritra miady, ary ireo mpanitsy-mpanamarina vaovao manampy ireo vahiny mpanangom-baovao. Miangavy jereo ato hahafantaranao bebe kokoa momba ny loka sy ny fomba fiasan'ny fangatahana/fanendrena. Fara-fisoratana anarana: 31 Mey 2020 amin'ny sasakalina (GMT)
Ho an'ireo liana hianatra Mapuzugun (fiteny Mapuche), nametraka lesona fianarana izany maimaimpoana ny namantsika ao amin'ny @kimeltuwe. Tongava manatevin-daharana ireo hafa efa mianatra ao amin'ny Memrise!
Ho an'ireo mpanabe sy mpiantra amin'ny fanoratan-gazety tratran'ny COVID-19: ny Poynter dia manolotra ny webinars sy fampianaran-tena afa-karatsaka amin'ny Oneversitem-baovao hatramin'ny volana mey. Miangavy jereo ato amin'ny fomba ahafahanao misitraka ity tolotra ity, servisy ho an'ny vondrom-piarahamonina ao anatin'izao fotoana manahirana izao.
VAKINTENY, FIHAINOANA ary FIJERENA FANAMPINY
Bottom-up Connectivity Strategies: Why is research on community networks necessary? via APC (Association for Progressive Communications)
Esperantisto en Amsterdamo en la kronviruso-tempo [eo] araka ny anoloran'i Federico Gobbo azy ao amin'ny YouTube
Ankasitrahana i Eddie Avila nandray anjara tamin'ity taratasim-baovao ity.
Blaogim-Piarahamonina GV 8 ora izay